“ဒါ ကျားခြေရာဆိုတာ သေချာရဲ့လား”
“သြော်… ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ကြောင်ခြေရာကို အကျယ်ချဲ့ပြီး ကြည့်လိုက်တာလားလို့ပါ၊
၁၉၉၇ / နိုဝင်ဘာလထုတ် စာအုပ်ထဲမှ “ခြေရာ”အမည်ရှိ ဝတ္ထုတို။
လွန်ခဲ့သော လေးငါးခြောက်ရက်တုန်းက ကျွန်တော် ကြောင်ခြေရာတစ်ခုကို အကျယ်ချဲ့ကြည့်မိပြီး
ကျားခြေရာကြီး မြင်မိသလိုမျိုး ခံစားချက်တွေ အိုဗာ ဖြစ်မိခဲ့ပါသည်။
ပြဿနာ တစ်ခုနှင့် ကြုံရသည့်အခါတိုင်း သွေးဆူလွယ် ခံစားလွယ်တတ်သော ကျွန်တော့် ထုံးစံအတိုင်း
တအုံ့နွေးနွေးဖြင့် မပြီးနိုင် မစီးနိုင် ခံစားမှုတွေ ပြင်းထန်ပြီး စိတ်ထင်ရာတွေ ပြောမိ၊ရေးမိ၊ လုပ်မိသည် ဆိုပါစို့။
အမှန်တော့ ကြုံရသည့် ပြဿနာသည် သွေးအေးသွားသော ယခုအချိန်မှာ ပြန်ကြည့်သောအခါ…
ကျားခြေရာလောက် မကြီးမားသည့် ပြဿနာမျှသာ … ။
အဲသည်တုန်းကတော့ သွေးမအေးတတ်သောကြောင့် ကြောင်ခြေရာလောက်ကို ကျားခြေရာကြီးသဖွယ် ထင်မှတ်ကာ
ပိုပိုသာသာ ဖြေရှင်းချက် ထုတ်ချင်နေခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အထူးအထွေလည်း မဟုတ်လှ။ အဲသည် ပြဿနာကို ခံစားပြီး ဂမူးရှူးထိုး ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားနေရင်း တန်းလန်းမှာပဲ…
ဆရာတော် ဦးဇောတိက၏ တရားအဆုံးအမ စကားက နားထဲ ရောက်လာသည်။
“အရက်သမားနဲ့ ရန်ဖြစ်ဖို့ လုပ်ရင် ကိုယ်လည်း အရက်သမား ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ ကလေးငယ်နဲ့ ရန်ဖြစ်ဖို့ လုပ်ရင်
ကိုယ်လည်း မရင့်ကျက်တဲ့ ကလေးငယ်လို အဆင့် ဖြစ်သွားလ်ိမ့်မယ်။” အဲဒီလို အဓိပ္ပာယ် ရတဲ့ ဆုံးမ စကားပေါ့။
ကိုယ်က သူ့ကို မကျေနပ်လို့ အရွဲ့တိုက်ပြီး သူနဲ့ ယှဉ်- သူ့လို လိုက် လုပ်မိတာတို့ …
သူ့ဆဲ ကိုယ်ဆဲ ပြန်ဆဲတာတို့ဟာ … သူ့စိတ် အဆင့်အတန်းနဲ့ ကိုယ့်စိတ် အဆင့်အတန်း တူညီကြောင်း ပြနေသလို ဖြစ်သွားမယ်။
သူရိုင်းတိုင်း ကိုယ်လိုက်ရိုင်းရင်… လူရိုင်းတစ်ယောက်ကနေ နှစ်ယောက် ဖြစ်သွားမယ်။
သူ့ဘာသာ တစ်ယောက်ထဲ ရိုင်းပါစေတော့ဆိုပြီး… ကိုယ်က ပြိုင်ပွဲထဲက ထွက်ပေးလိုက်တာက ပိုကောင်းတယ်။
ပြိုင်ပွဲထဲ ကိုယ် မပါတော့တာက ပိုငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးကြောင့်…. လက်လွန်ခြေလွန် ပြောမိ လုပ်မိတော့မယ့် ဆဲဆဲ အခြေအနေကို
ဒီကိစ္စတွေက ဘယ်လောက်များ ငါ့ဘဝအတွက် အရေးကြီးနေလို့လဲ လို့
ပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့…. ပြိုင်ပွဲထဲကနေ ပြုံးပြုံးလေး လှည့်ထွက်နိုင်သွားတယ်။
ဒါတွေ ဒါတွေထဲ ငါ ဝင်မပါလို့လည်း ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူးလေ လို့
အဲသည်နောက်မှာမှ ဆရာတာရာမင်းဝေရဲ့ ခြေရာဆိုတဲ့ ဝတ္ထုတိုလေးကို ဖတ်မိသွားတော့ ပို နေလို့ ကောင်းသွားတယ်။
အော်… ငါ့နှယ်…. ကြောင်ခြေရာကလေးကို အကျယ်ချဲ့ ကြည့်မိပြီး ကျားခြေရာ အမှတ်နဲ့ အကြီးကြီး ခံစားနေခဲ့တာပါလားလို့
ကိုယ့်ကို သတိပေးသလို ဖြစ်သွားတယ်။
အမှန်စင်စစ် ကျားခြေရာလား၊ ကြောင်ခြေရာလားဆိုတာ တိတိကျကျ မြင်တတ်ဖို့၊ ကြည့်တတ်ဖို့ သတိထားအုန်းမှပါလေ….
ကျွန်တော့် မျက်လုံး အမြင်အာရုံရဲ့ အရှေ့မှာ … အရှိထက်ပို ကြီးပြီး မြင်ရစေသော သို့တည်းမဟုတ် အရှိထက် ပို သေးပြီး
မြင်ရစေသော မသိခြင်းတရားကို ဖယ်ရှားနိုင်ပါစေတော့….
သိခြင်းနဲ့ ကြည့်နိုင်မြင်နိုင်ပါစေတော့…. လို့….
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန် သတိပေးလိုက်နိုင်သော ဝတ္ထုကလေးပါပဲ။
Pointillim / Pointillisime ဆိုတဲ့နည်းစနစ်တစ်ရပ်ရှိပါတယ် ။
အင်ပရင်ရှင်နစ် လက်သစ် ၀ါဒီတွေရဲ့နည်းစနစ်လို့သိရပါတယ် ။
ဂျော့ဆူးရတ်ဆိုသူက ဦးဆောင်ပြီး.သုံးစွဲခဲ့တယ်…တဲ့။
ပန်းချီကားတစ်ချပ်ကို သေးငယ်တဲ့ …
အစက်အပြောက်လေးတွေနဲ့ဖော်ဆောင်ပြခြင်းလို့ ….. ခပ်လွယ်လွယ်ပြောနိုင်ပါတယ် ။
တင်ပြခဲ့တဲ့ဝတ္ထုတိုလေးတွေဟာ….
ဇာတ်လမ်းသဘော / ဇာတ်ကွက်သဘောမျိုးတွေ..ကို
ပွိုင့် ( Point ) သဘောကို..ဆောင်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီဝတ္ထုတိုလေးတွေက အယူအဆ အတွေးအခေါ်တွေကို…. ခံစားသိနဲ့ ..ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်မယ် ထင်ပါတယ် ။
အဲဒီလို…ကျစ်လျစ်လွန်းတဲ့စာသားတိုတို ၀တ္ထုလေးတွေကို…
ဆရာတာရာရဲ့ဖန်တီးမှုကို… မဖတ်ရသေး / မသိရသေးတဲ့စာဖတ်သူတွေအတွက်..ပြန်လည် ဝေမျှလိုက်ပါတယ် ။
ဖတ်ပြီး/ သိပြီးသူတွေလည်း….. ပြန်လည် သတိရ ပြီး.ခံစားနိုင်အောင်…..
ကျွန်တော့်အတွေး နဲ့ အရေးကိုပါ….. ပူးတွဲပြီး… ၁၆ ပုဒ်လောက် … ရေးသား တင်ပြဖူးပါတယ် ။ အောက်ပါ link ကတော့ အရင်က ကျွန်တော် ပြန်လည် တူးဖော်ပေးခဲ့တဲ့ ဆရာတာရာမင်းဝေရဲ့ မြေစိုင်မြေခဲများအကြောင်း ဆောင်းပါးတွေပါ။